Ukubika Ukwebiwa Kokuqukethwe kwa-Adsense njengokwephula i-DMCA | Martech Zone
Ukubika Ukwebiwa Kokuqukethwe kwa-Adsense njengokwephula i-DMCA
NgoMsombuluko, Julayi 21, 2008 NgoMgqibelo, Juni 25, 2016 Douglas Karr
Nginqume ukuya empini nomshicileli oduniwe ukudla kwami ​​futhi okhipha okuqukethwe kwami ​​ngaphansi kwegama lakhe newebhusayithi yakhe. Usebenzisa ukukhangisa nokwenza imali ngokuqukethwe kwesiza sami futhi ngikhathele yikho. Abashicileli, kufaka phakathi ama-blogger, banamalungelo ngaphansi kwe- Digital Millennium Copyright Act.
I-Digital Millennium Copyright Act (DMCA) umthetho wase-United States (owabekwa umthetho ngo-Okthoba 1998) oqinisa ukuvikelwa kwezomthetho kwamalungelo empahla yobuhlakani angazange ahlanganiswe ku-Original Copyright Act yase-US. Lezi zibuyekezo bezidingeka ukwamukela ubuchwepheshe obusha bokuxhumana nabezindaba, ikakhulukazi maqondana ne-inthanethi. Izinguquko ezenziwa ngumthetho we-copyright wase-US ohambisana ne-World Intellectual Property Organisation (WIPO) Copyright Treaty kanye ne-WIPO Performance Phonograms Treaty.
Ekubuyekezeni isiza somshicileli, ngibonile ukuthi bakutholile okuphakelayo ngokuphakelayo kwami ​​kwe-RSS. Lokhu ukwephula i- Imigomo Yesevisi ye-FeedBurner.
Okubaluleke kakhulu, lo mshicileli usebenzisa izikhangiso ze-Adsense. Ukweba okuqukethwe nokusebenzisa izikhangiso ze-Adsense yi ukwephula okuqondile kweMigomo Yesevisi ye-Google.
Ngithinte abakwa-Adsense futhi ngabika le nkinga, futhi ngihlangabezane nezinye izidingo okufanele ngiziqedele. Isiza se-Adsense siyachaza:
Ukusheshisa ikhono lethu lokucubungula isicelo sakho, sicela usebenzise le fomethi elandelayo (kufaka nezinombolo zesigaba):
Thola ngemininingwane eyanele umsebenzi one-copyright okholelwa ukuthi wephulwe umthetho. Isibonelo, "Umsebenzi one-copyright okukhulunywa ngawo ngumbhalo ovela ku-http: //www.legal.com/legal_page.html."
Khomba impahla oyibizayo yephula umsebenzi one-copyright obhalwe entweni # 1 ngenhla. Kufanele ukhombe ikhasi ngalinye okusolwa ukuthi liqukethe okwephula umthetho ngokunikeza i-URL yalo.
Nikezela ngolwazi olwanele ukuvumela i-Google ukuthi ixhumane nawe (kukhethwa ikheli le-imeyili).
Faka isitatimende esilandelayo: "Nginenkolelo enhle yokuthi ukusetshenziswa kwezinto ezinelungelo lobunikazi ezichazwe ngenhla emakhasini ewebhu okusolwa ukuthi aphula umthetho akuvunyelwe ngumnikazi we-copyright, umenzeli wakhe noma umthetho."
Faka isitatimende esilandelayo: “Ngiyafunga, ngaphansi kwesigwebo somgunyathi, ukuthi imininingwane ekulesi saziso inembile nokuthi ngingumnikazi we-copyright noma ngigunyaziwe ukuthatha isinyathelo egameni le
umnikazi welungelo elikhethekile okusolwa ukuthi lephuliwe. ”
Thumela ukuxhumana okubhaliwe kuleli kheli elilandelayo:
I-Attn: Ukuxhaswa kwe-AdSense, Izikhalazo ze-DMCA
IMountain View CA 94043
NOMA Ifeksi ku:
(650) 618-8507, Attn: Ukuxhaswa kwe-AdSense, izikhalazo ze-DMCA
Le mibhalo izothunyelwa ngeposi namuhla!
Tags: -adSensecopyrightdmcaisikhalazo se-dmcaizikhalazo ze-dmcai-Google adsense
Jul 21, 2008 ngo-12: 57 PM
Umbono omuhle lowo. Ngibe ne-splogger ephakamisa okuqukethwe kwami ​​isikhashana futhi okuthunyelwe kwakho kungikhuthazile ukuthi nami ngithathe isinyathelo. Akubukeki sengathi bayayisebenzisa ukwengeza imali, kunalokho kusetshenziselwa ukuhambisa kabusha ithrafikhi kwenye indawo yabo. Gah.
Jul 21, 2008 ngo-4: 33 PM
Uxolo ukuzwa ngale Doug, ngethemba ukuthi uzoyihlela.
UBarbara Ling, Umqeqeshi Ongokoqobo
Jul 21, 2008 ngo-5: 07 PM
Ikhono elihamba phambili ekuxazululeni lokhu !! Kudos kuwe ngokusebenza.
Izifiso ezinhle, uBarbara
Jul 12, 2010 ku-11: 27 AM
Kwangathi ungafaka isikhalazo nenkampani eyisingathile.
Yiba nomuntu ontshontsha okuqukethwe kwami ​​kanye nabantu esincintisana nabo namabhulogi amaningi okungewona awokuhweba embonini yami.
Lo mfana unenethiwekhi yakhe yamanye amasayithi amaningi.
Njengoba enakho konke okuqukethwe kwethu mayelana nesifuba somoya nesifo somzimba kanye nakho konke okuqukethwe okuvela kwamanye amabhulogi amaningi, uvame ukusikhiphela esikubhalayo.
Kubangele ukudideka ngabantu abazama ukubuyela kokuthunyelwe.
Ngifaka isikhalazo ku-Google manje.